I-Carnival ... I-Carnival eRio de Janeiro. Isimo se-carnival: izincomo
I-Carnival iyiholide elihle kakhulu elihle kakhulu, izici ezithinta ukuhamba ngezinyawo nezindlela zokugqoka. Ngaphandle kwemikhosi enjalo kazwelonke kunzima ukucabanga nganoma yiliphi izwe emhlabeni.
I-Carnival inomlando omude kakhulu futhi akunakwenzeka ukusho ngokucacile mayelana nokukhulunywa kwayo kokuqala. Igama ngokwalo, ngokusho kweyodwa inguqulo, livela kuLatin Carrum navalis. Ngakho-ke, ezikhathini zasendulo kwakubizwa ngokuthi inqola, lapho bahamba khona bezungeza umuzi phakathi kwamaholide. Ngokwesibonelo, eRoma lasendulo, ngokuhlonipha unkulunkulu wokuzala kukaSaturn, iholide elijabulisayo laqhutshwa, lihlala izinsuku eziningana. Ngaleso sikhathi, umsebenzi wokuvuna wawuphelile, abantu bebesuka emizini yabo, becula futhi bedansa. Izigqila zadedelwa emisebenzini yabo, futhi amadoda nabesifazane bahamba emigwaqweni ephethe izinqola.
Ngokwezinye izinguqulo, imikhosi yenziwa yiCarne levare, okuvela ngesiNtaliyane isho "ukuyeka inyama". Kungokuqala ukuzila ukudla futhi ukwenqaba ukudla imikhiqizo yenyama. Njengoba ubona, kungenzeka ukulandelela i-Shrovetide evamile eholidini laseRussia.
I-Carnival eRio de Janeiro
Namuhla izidumbu zisezingeni eliphezulu lokuthandwa. Abantu abaningi bahamba amabanga amade ukuba bahlanganyele kulo mkhosi omkhulu. Mhlawumbe edumile kakhulu futhi enemibala ngumkhosi waseRio de Janeiro. Iqala izinsuku ezingu-40 ngaphambi kokugubha iPhasika.
I-carnival eRio ishaya ngokulingana, imibala ekhanyayo, izingubo ezidangayo nemidanso. Kusukela ngo-1928 kuwumncintiswano wezikole zomdanso we-sambo. Lolu hlobo lomdanso luvame kakhulu eBrazil, futhi wonke amaBrazil anesikole sambo esithandayo.
Unyaka ngaphambi komkhosi, bonke abadansi balungiselela uhlelo olukhethekile, ngendaba ejwayelekile engajwayelekile engxoxweni ethile. Abashayeli be-choreographer abahle basebenza ohlelweni lokudansa. Ukususa inombolo enkulu yezingubo. Zingazinikezela kubuntu abathile, komunye umcimbi, ukubonisa inkathi ethile.
Ngaphezu kwalokho, isikole ngasinye silungiselela isiteji esikhethekile somdanso futhi siwuhlobisa kahle. Kulesi sigaba, umdanso womdanso, futhi ephezulu kakhulu, njengombuso, uphakamise intombazane enhle kunazo zonke futhi enhle kakhulu, obizwa ngokuthi indlovukazi yesikole sokudansa.
Umkhosi owenza kanjani?
Umkhosi waseRio uhlala ubusuku obungu-4. Kusukela ngo-21: 00 kuze kube sekuseni kukhona izikole ezingu-3-4 (kunezinombolo eziyi-14 eBrazil). Izinkulumo zihlolwe yijaji elikhethekile.
Abadansa badlulisa umjikelezo wokudansa eceleni komgwaqo omude we-Sambodrome (ubude bawo buyizingamamitha angaba ngu-700), okwakhiwa ngokukhethekile emkhosini. Ezingxenyeni zombili kukhona izindawo ezikhethekile lapho abantu abangaba ngu-70 000 abangakwazi khona. Bonke babo baqothula esikoleni sabo abathandayo. Umqhudelwano uqala ngokusebenza kwesigaba sokuqala sambo esikoleni. Konke kwenzeka kanje: bathwala isibonakaliso ngegama lesikole, bese kuthi abasebenzi bayo, abantu abadumile abagqoke izingubo ezibucayi, bese kuthi izinkulungwane zabadlali nabaculi badlula. Labo abafuna ukuphuma, bagibele phansi emgwaqweni ngamakhansela nezinqola ezihlotshiswe ngezinpaphe nezindwangu.
Ukuncintisana njengomdanso, izingubo ezingavamile nobuhle. Umkhosi waseBrazil uhlale uyingoma yokuziqhenya, isigubhu esingapheliyo, umsindo wokugcoba, i-chic, ukudansa okuvuthayo kanye nezembatho ezimnandi. Iholide lokudansa iphela ngokusebenza kwamaqhawe - esikoleni saseSambo, okusho, ngokusho kwemiphumela yokuvotela kwejaji, waba umqoqo.
I-Carnival ithandwa kakhulu ukuthi izinkulungwane zezivakashi ezivela emazweni ahlukene ziza eBrazil nsuku zonke phakathi kwazo. Amahhotela anqwabelene, futhi ukuze ume endaweni ethile, udinga ukubhuka izihlalo ezinyangeni ezimbalwa. Amanani okuhlala ngesikhathi sokugubha umkhosi "asuse", kodwa akavimbeli abalandeli bokudansa.
Indlela yokuhlela umkhosi?
Imikhosi evuthayo nejabulisayo ingahlelwa ngokuzimela! Akuwona wonke umuntu onethuba lokuya eBrazil, kodwa ukuhlela umbukiso wabo omncane wokudansa ngempela. Iqembu elidala noma iqembu labantwana - umkhosi awukwazi umkhawulo weminyaka. Cabanga ngezimo eziningana ezingathathwa njengesisekelo sokubamba iholidi lakho.
Isimo sezindiza kubantu abasha
Ukuqoqa inkampani enobungane enomsindo, uhlale ufuna ukungafani ngandlela-thile umkhathi, ufike okuthile okukhethekile. Lapho i-banal imincintiswano nemidlalo isivele isithukuthele, ungazama ukubamba iqhaza ngokuvumelana nesimo esandulele ngaphambili. Umqondo omuhle ukuhlela umkhosi. Ngiqala kuphi?
Ukulungiselela kufanele kuthathwe ngokungathí sina futhi kuqhubeke isikhathi eside ngaphambi komcimbi ngokwawo. I-Carnival iyiholide lapho kuzodingeka usebenze kanzima hhayi kuphela kubamabonakude nabahleli, kodwa nakuzo zonke izivakashi ezimenyiwe.
Lokhu, mhlawumbe, kubaluleke kakhulu. Yini ngempela ofuna ukuyihlela? Umkhosi oshisayo waseBrazil ngemidanso engcolile? I-masquerade ibhola? Umkhosi wesimanje ojabulisayo noma ibhola lezwe lama-80s? Ngokushesha ulungiselele ukuthi iholide kuleli sitayela kudinga ukutshalwa kwezimali okuhle. Uma ulondoloza okuthile - umphumela uyohluka ngokuphelele.
Izindleko zidlala indima ebaluleke kakhulu. Wonke umuntu kufanele acabange ngokucophelela ngesithombe sakhe. Izigqoko zazo zonke izivakashi zingaba ngesitayela esisodwa, ezihluke ngokuphelele, noma zifana nomunye umuntu okhanyayo.
Unganaki ukunakekelwa kwezesekeli zomkhosi. Lezi zingaba masks, amaglavu, ama-wigs, iziqeshana zezinwele, izambulela, abalandeli, amathrekhi. Ngaphezu kwalokho, cabanga ngokuthi igumbi liyohlotshiswa kanjani (okuyinto, ngendlela, kufanele ibe nkulu ngokwanele ukuba ibe nesikhala esanele sokuhlala nokuphumula, nokudansa).
Ungacabanga ngamithombo amancane, uhlele izithombe, ubeke izithombe, abalandeli. Qinisekisa ukuthi ubeka amashebuli ezinemibala, ama-sequin, imihlobiso emihlobiso. Kubalulekile ukwakha lapha izihloko zomkhosi, isiqondiso saso. Ukuze umdanso uhlele umculo okhanyayo.
Indlela yokuphatha izivakashi?
Emenyu, futhi, udinga ukucabanga ngakho ngangokunokwenzeka. Ukudla akufanele kube nzima, ngoba kufanele udansa okuningi. Inketho ekahle ukwenza i-buffet ngokudla okulula okulula (ukudla okulula), ama-canapés wangempela neziphuzo ezivuselelayo. Isihloko sezemikhosi kufanele silandelwe emhlobiso wokudla. Isibonelo, ungakwazi ukuhlobisa kahle izibuko zewayini, uhlele ama-napkins angavamile, itafula lokuphatha ukuhlobisa ngezimbali, iziqu ze-statuettes.
Iningi leholidi lizoqala ukudansa. Ngakho-ke, ngaphandle komncintiswano womdanso awukwazi ukwenza. Ungamema izivakashi ukuba uhlukaniswe ngamaqembu amaningana futhi, ngokulandela isibonelo semikhosi yaseRio de Janeiro, uhlele imincintiswano phakathi kwabo. Iliphi iqembu elizokwenza umdanso ngendlela engcono kakhulu? Futhi yini ngempela, izivakashi zingafunda isikhathi eside ngaphambi komkhosi (futhi ngokufanele ukulungiselela, ukuvuselela) noma ngokushesha ngaphambi kokuqala komdanso.
Njengoba izivakashi zazilungiselela imikhosi, ukuthunga izingubo, ukucabanga ngesithombe, kubalulekile ukubamba umncintiswano wezimpahla ezinhle kakhulu. Kuyathakazelisa uma ijaji likhetha, kodwa abahlanganyeli ngokwabo. Bangabhala igama ephepheni, futhi emva kwalokho kuzoba khona isimemezelo semiphumela. Uma zonke izimenywa zifaka imikhosi yemikhosi, ungabe uhlela umncintiswano phakathi kwabo, isibonelo: "Ubani ophethe imaski yokuqala?" Uma izivakashi eziningi zingena ngaphandle kwemaski, kunenye indlela: ukunikela ngamaski ajwayelekile okuphekwe ngaphambilini okwe-zadekorirovat Bese unquma ukuthi ubani owakwazi ukwenza okuningi ngokuhlakanipha.
Ukuphela okuphelele kokuhlwa kuzoba yiseshini sesithombe. Kudingeka ukuthi zonke izithombe zifakwe ndawonye esithombeni jikelele. Futhi ungahlela ukuhlobisa izithombe ezincane, izivakashi zizoyiqonda futhi zifuna ukwenza isithombe esihle sizoba kakhulu!
I-Carnival Yonyaka Omusha Wezingane
Ubani oyothanda umbukiso oqhakazile ngemidanso ehlekisayo, izingubo ezingavamile, imaski, i-sparkles, izibhamu nemincintiswano? Ukuhlela umkhosi wezingane kuwumqondo omuhle, ikakhulukazi uma umcimbi usuphelile isikhathi seholidini. Isibonelo, ngoNyaka Omusha.
Imihlobiso ingaba indinganiso ngokuphelele. Uma konke kudlulela enkulisa noma esikoleni, ihholo lihlotshiswe ngama-tinsel, izibani ezimibalabala, ama-snowflakes. Ungapenda amawindi ngendlela engavamile, wenze imihlobiso emihle, u-hang new Year balls. Futhi-ke, gqoka umuthi kaKhisimusi.
Izindleko zezingane zixoxwa kusengaphambili futhi zixhomeke esihlokweni lapho umkhosi uzoba khona. Iholide ingaba ngesimo sezinganekwane ezithile. Kulokhu, izingane zidinga ukugqoka njengeziqhawe zale ndaba efanayo. Noma izingane zingabantu abahlala emahlathini, izilwane ezahlukene, ezijabulisa futhi zidansa esihlahleni sikaKhisimusi kanye noBaba Father Frost no-Snow Maiden. Njengokuzikhethela - ungenza i-masquerade. Izingane zizokujabulela ukuzama ukugqoka imikhosi futhi zifihle ngemuva kwazo. Ngeke babone ubuso bomunye nomunye, okusho ukuthi bazoba mnandi kakhulu.
Njengoba kungenakwenzeka indlela yokwenza isenzo esinjalo iholide Unyaka omusha usondela. I-Carnival ayiyona izingubo ezigqamile kuphela, izingoma ezihle futhi ezidumile. Futhi izingane ngokuvamile zidansa ngokuzungezile ngesihlahla sikaKhisimusi, idansa "nabantu abahlala emahlathini", zicula izingoma kuSanta Claus, zihlanganyele emincintiswaneni. Umsebenzi womhleli ukuqondisa inkambo yomcimbi ngendlela efanele, ukuze kungabi nje iPhathi Lonyaka Omusha, kodwa imidwebo, ngamaski, amadansa nezingubo ezingavamile kuvele.
Ziyini izinzuzo zalezo zenzakalo?
Ngokuvamile, amaholide anjalo ezinkulisa kanye nasesikoleni samabanga aphansi aphishekele imigomo elandelayo:
Thuthukisa amakhono omculo wezingane;
Ncoma ulwazi lwabo enkundleni yomculo;
Thuthukisa amakhono okudansa nokudlala;
Yenza impendulo kumculo wezinhlobo ezahlukene, izitayela;
Yakha ikhono lokuziphatha ngokuzimela, khetha indlela efanele yokuziphatha, kuye ngokuthi isimo;
Fundisa ingane ukuthi ingesabi izethameli;
Yakha ikhono lokukhuluma ngezithombe ezihlukahlukene;
Ukwakha amakhono okudala, umcabango.
Abaholi bangathatha ngokugcwele iskripthi, beze namaqhawe. Uma kunokwenzeka, izingane ngokwabo kufanele zifakwe phakathi neholidi, kufanele zinikezwe indima, hhayi nje ukuzenza izibukeli. Uma iminyaka ikuvumela ukuba ufunde izindima ezinde futhi udlale, unganika amagama kubantwana ukuze uthole izigcawu zonyaka omusha kusengaphambili. Futhi ungahlela imincintiswano. Yimuphi umdlalo weqembu owawusekuqaleni? Ubani owayengumdlali omkhulu noma udansa?
Futhi-ke, ekupheleni komkhosi, kubalulekile ukuqaphela izingubo ezinhle kakhulu, ngoba izingane zizame kanzima. Ungabamba umncintiswano ngokubiza i-jury yangempela yabazali, othisha noma othisha. Ungavumela izingane ukuba zivote. Into eyinhloko, uma kuziwa ezinganeni, wonke umuntu kudingeka avuzwe, ngoba kuzo zonke izibopho kuzoba nakanjani kube yinto enhle kakhulu, futhi izingane ezineminyaka engakaze ziqonde lokho okusemqoka komncintiswano noma ukuncintisana!
Ngokusobala, akulula kakhulu ukuhlela umkhosi. Kodwa uma konke kucatshangwa ngokucophelela futhi kuhlelwe kahle, iholidi elinjalo liyokhunjulwa isikhathi eside, kokubili izingane kanye nabantu abadala!
Izincwadi: Ngenza kanjalo
Agasti 30: Yisiphi iholide egujwa eRussia ngalolu suku?
I-constellation eyinqaba yamaPisces
Umthetho 242 on the Protection of Personal Data. UMthetho Federal 242 (uMthetho idatha yomuntu siqu): Ushintsho kanye nokuphawula
"Sebacyl" 50%: yokusetshenziswa izilwane
Abantu kuqala: imicabango, imibono, ubufakazi
Izidakamizwa "Verakol" ngoba izinja: yokusetshenziswa